ချိုးဖောက်မှုအတုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး | Rieter ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပဒေရေးရာခရက်ဒစ်ဗျူရို
မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပြဌာန်းချက်များကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင်မူပိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ မူပိုင်ခွင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းကာကွယ်ရေးနည်းစနစ်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောသော့ချက်ဖြစ်လာသည်။ အသိပညာဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုဥပဒေရေးရာကာကွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်အသုံးပြုထားသည်။ "အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး" ၏အရေးပါမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် "အတု" သည်တီထွင်သူများ၏ဉာဏ်ရည်ကိုဝေမျှရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှုများအားမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ တရားမ ၀ င်သောအတုအယောင်ပစ္စည်းများအားအခြားသူများ၏အောင်မြင်မှုများကိုမွေ့လျော်စေရန်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများ၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့်အကျိုးစီးပွားများကိုလုပ်ဆောင်ပြီးကျင့်သုံးပါ။
အတုအမျိုးအစားများကို LOGO အတု (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်)၊ ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်နည်းပညာအတု ဟူ၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ခွဲနိုင်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတုများသည်အသွင်အပြင်နှင့်အတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုတုပ။ တွဲဖက်လေ့ရှိသည်။ နည်းပညာသည်မဆင်းရဲပါ၊ သို့သော်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ အခြားသူများအမြတ်ရရန်ဤမျှကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ဖူးသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာ၏အားသာချက်ကိုယူနည်းလမ်း။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အတုများကိုစစ်မှန်သောအမျိုးအစားအတုများနှင့်အခြားသူများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်အခြားစျေးနှုန်းမြင့်မားသည့်ပစ္စည်းများကိုအတုပြုလုပ်ရန်စျေးပေါသောပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ စားသုံးသူများကို ၀ ယ်ရန်လှည့်စားနေသည်ဟုသံသယရှိသည်။
လောဘကြီးသောလူ့သဘောသဘာဝသည်ယခုအချိန်အထိသူတစ်ပါး၏ဉာဏ်ပညာကို plagiarizing ၏ပြproblemနာမှလွတ်မြောက်ရန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ, ဒါကြောင့်အတု၏ပြproblemနာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်။ ၄ င်းတို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များအပါအ ၀ င်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ခွင့်များကိုစနစ်တကျစီစဉ်ရမည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများကိုပထမ ဦး စွာရယူရမည်သို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာကာကွယ်မှုရရှိရန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအတွက်မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရမည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အဝထူထောင်မှသာအခြားသူများ၏ချိုးဖောက်မှုကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
အတုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်သင့်ကိုယ်စားစေ့စေ့စပ်စပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Rieter Credit Bureau အားအပ်နှင်းထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုစာရွက်စာတမ်းများကိုပူးတွဲတင်ပြထားပြီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဖြစ်ရပ်၊ အချိန်၊ နေရာနှင့်အတုပြုလုပ်ထားသောအပြုအမူများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် (ဆိုလိုသည်မှာအတု၊ အတု၊ အတုနေရာများ၊ အတုအချက်အလက်များနှင့်အတုနှင့်ပတ်သက်သောသဲလွန်စအမျိုးမျိုး) နေသမျှကာလပတ်လုံး Rieter Credit Check အမှားမရှိဘဲကော်မရှင်ကိုလက်ခံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သေအထောက်အထားရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးကိရိယာများကိုချက်ချင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်းပြီးဆုံးသွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားရုံးသို့ပုဂ္ဂလိကတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်စေ၊ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာပိုင်၏ရုံးချုပ်သို့အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တန်ပြန်အစီအမံများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသင့်သည်။ အမှန်တရားစာတွင်ကုမ္ပဏီ၏မူပိုင်ခွင့်များကိုကာကွယ်သင့်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်၊ တီထွင်မှုများ၊ ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်များစသည်တို့သည်စိတ်ရင်းစေတနာ၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုစသည်တို့ကိုအတုအယောင်ဖြစ်စေ၊ ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်စေသည်။ သင်၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အထားများစုဆောင်းရန်ကုမ္ပဏီကသင့်အားကူညီသည်။
ချိုးဖောက်မှုအတုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကြေး - စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာအကြွေးသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်၊ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။
ငါချိုးဖောက်မှု, အတု, etc ၏သက်သေအထောက်အထားများကိုရှာဖွေ, ငါ့ကုမ္ပဏီ၏ချစ်ကြည်ရေးနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
စီမံကိန်းစနစ် - ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ချစ်ကြည်ရေးနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှသက်သေအထောက်အထားများကိုသဲလွန်စအမျိုးမျိုးမှရှာဖွေပါ။
ချိုးဖောက်မှုအတုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် အမှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် ချိုးဖောက်မှုအတုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, အသေးစိတ်ကိုးကားမှု၏အခွအေနပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ချိုးဖောက်မှုအတုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ၀ န်ဆောင်မှု၏ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အခက်အခဲပေါ် မူတည်၍ ကွဲလွဲမှုရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကိစ္စရပ်ကိုရှင်းပြရန်စီးပွားရေး ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
၀ န်ထမ်းများကုန်ကျစရိတ်များအပြင်၊ မသမာသောမသန်စွမ်းမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွင်မြင်းနှင့်မြင်းခများ (ရေနံ၊ အမြောက်အမြားလက်မှတ်ဖြတ်သန်းခ၊ အဝေးပြေးလမ်းခရီးခ၊ နေရာ ၀ င်ခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခနှင့်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာကုန်ကျစရိတ်) တို့ပါ ၀ င်သည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍၊ အများပြည်သူအတွက်အသံဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုပြသခြင်းသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါသလော။
လူသိများသော Youtuber သည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုဓာတ်ပုံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်တရားခံသည်ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
line stickers များသည် plagiarizing ဖြစ်သော်လည်းအခြားပါတီတွင် plagiarism ရှိကြောင်းသက်သေပြရန်ခက်ခဲသည်။
ရည်ညွှန်းချက်နှင့် plagiarism ဆွဲသာလိုင်း၌ရှိကြ၏
ဘယ်သူကူးယူခဲ့တာလဲ ကျော်ကြားမှုကိုမကြောက်ပါနှင့်၊ သင်၏အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပါ။
စာရေးသူမှာစာရေးသူရှိလားမသိဘူးလား။ လူသိများသောပန်းချီဆရာပေါက်ကွဲခဲ့သည်၊ သူမဝန်ခံခဲ့သည်!
plagiarism မရှိကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆို? ဒါဟာရေတိမ်ပိုင်းသတိမိမိကိုယ်ကိုနာကျင်ကြောင်းထွက်လှည့်။
Plagiarism နှင့်အခွန်ဆက်? ခြားနားချက်ကဘာလဲ
မြင်သာထင်သာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် intangible ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု, သငျသညျအဟောင်းကိုလေးစားပေမယ့်နောက်တစ်ခုကော?
သူတို့ဟာတူညီသလား၊ plagiarists သူတို့ကိုယ်သူတို့မသိကြောင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်!